Abaal marinta Ballon d'Or
Tobankii sanadood ee ugu danbeeyay markii ugu horaysay waxaa si wayn looga shakisan yahay xidiga ku guulaysan doona abaal marinta Ballon d’Or iyada oo markii hore ahayd abaal marin u dhexayn jirtay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo laakiin wargayska Marca ayaa tilmaamay in abaal marinta Ballon d’Or la keeni doono magaalada Madrid.
Saadaasha abaal marinta Ballon d’Or waxay u badan tahay in uu ku guulaysan doono mid ka mid ah ciyaartoyda xulka qaranka France ee koobka aduuka ku soo guulaystay waxaana soo raaca Luka Modric oo xulkiisa Croatia la soo gaadhay finalkii isla markaana Champions league kula soo guulaystay Madrid.
Waxaa soo baxayay warar sheegayay in Mbappe, Varane iyo Luka Modric ay yihiin saddexda xidig ee midkood ku guulaysan doono abaal marinta Ballon d’Or laakiin wargayska Marca ayaa meesha ka saaray Mbappe waxayna booskiisa dhigeen Antoine Griezmann.
Wargayska Marca ayaa sheegay in abaal marita Ballon d’Or la keeni doono magaalada caasimada Madrid isla markaana ay udhexayso Raphael Varane, Luka Modric iyo Antoine Griezmann.
Qoraalka Marca ayaa qaybta ugu muhiimsan lagu yidhi: “Mid ka mid ah ciyaartoy ka yimid Estadio Santiago Bernabeu ama Estadio Wanda Metropolitano ayaa u muuqda mid ka nasiibka leh. Tan iyo markii jimcihii hore la soo xidhay codbixiintii, Radio Europe 1 waxa uu sheegay in Modric uu ku guulaysan doono oo uu ka horayn doono Varane iyo Mbeppe isaga oo ka tagay Griezmann”.
Laakiin qoraalka Marca ayaaba heer kale loo sii qaaday waxaana lagu yidhi: “Si kastaba ha ahaatee, talaadadii waxaa France laga ogaaday in bushqada France Football ay waqti dhaw soo gaadhi doono Madrid”.
Laakiin qoraalka Marca ayaa lagu sii sheegay in wali aan la kala ogayn Modric iyo Varane midka ku guulaysan doona abaal marintan balse ay abaal marintu Madrid iman doonto isla markaana ay France Football ay haddaba diyarisay bushaqadii iyo abaal marinta uu gudoomi doono ciyaartoy caasimada Madrid ka ciyaaraa.